Best Destinations In Eoropa nandeha nandritra ny faran'ny herinandro | Save A Train
Boky A Train Ticket ANKEHITRINY
Home > Travel Europe > Best Destinations In Eoropa nandeha nandritra ny faran'ny herinandro
ny Laura 28/05/2019
(Last Nohavaozina: 01/01/2020)
Kady ny fiaramanidina noho ny fiaran-dalamby ary nandeha Eoropa ho Weekend Wonder. Save A Train mahatonga azy mora ny boky ao anatin'ny minitra tsy misy koa sarany, mba afaka mankafy ny tahiry amin'ny fiaraha-mientana! Ireto ny safidy ho an'ny Destinations tsara indrindra tany Eoropa mba nandeha nandritra ny faran'ny herinandro lamasinina.
Best Gateway Toerana tany Eoropa mba nandeha nandritra ny faran'ny herinandro: Barcelona
Izahay efa Niresaka momba ny Espaina fotoana vitsivitsy. Azonao atao ny manamarin ny lahatsoratra hafa avy Eto. ankehitriny, ny toro-hevitra ho an'ny Destinations tsara indrindra tany Eoropa mba nandeha nandritra ny faran'ny herinandro lamasinina dia mifantoka fotsiny amin'ny Barcelona.
Barcelona dia tena mora ny miditra amin'ny ankamaroan'ny faritra Eoropa, fa noho ny aina ny boky, Ho isika hiala avy London noho izany diany. Leave asa 2 PM amin'ny zoma, amin'ny andro ho hisambotra ny 3 PM Eurostar ho any Paris. Misy fotoana fotsiny ho Vin Rouge ao amin'ny Paris Cafe alohan'ny niditra ny "fiaran-dalamby Hotel" ho Barcelona.
Ankehitriny rehefa any ianao, ny hatao:
Angamba no malaza indrindra rafitra in Barcelona, ny Sagrada Familia. Ny Basilica Noforonin'Andriamanitra ny maritrano Gaudi ary efa fananganana rafitra io hatramin'ny 1882. Dia sarotra ny fahazoana sary tsy misy fanentanana an-tsary, nefa dia tena mendrika ny fitsidihana.
Secret Barcelona tendron'ny: Ao amin'ny tany ankoatry ny Basilica misy dobo kely avy amin'ny toerana ahafahanao maka sary mahagaga. Ataovy mafy ny Instagram lalao, ary mandoa ny fitsidihana ity toerana ity.
Another rafitra malaza amin'ny Gaudi no Casa Batllo. Any tsy lavitra an'i Las Ramblas, ho hitanao izany amin'ny trano manokana ny Passeig de Gracia. Dia naorina 1877. Raha Fancy mitsidika io trano io sy te hahita ny ao anatiny koa, ho azo antoka ianao hividianana tapakila mialoha, dia mpizaha tany in Barcelona ary afaka mahazo tena be atao, ambony indrindra amin'ny vanim-potoana.
Fun Marina: ny amin'izao fotoana izao Casa tompon'ny Batllo no Bernat family, known for being the owners of Chupa Chups lollipops.
Fotoana lohan'ny an-trano.
The 9 PM trainhotel ny alahady alina dia hahazo anao miverina any afovoan'i London amin'ny 11:55aho ny Alatsinainy.
Best Gateway Toerana tany Eoropa mba nandeha nandritra ny faran'ny herinandro: Roma
Ny Eternal City dia toy ny mahasarika tahaka ny mandrakizay ary tsy afaka miresaka momba ny Weekend getaway raha tsy izany! Makà antoandro Eurostar sy ny fiovana ao Paris ho an'ny Roma. Maharitra ny sakafo hariva ao amin'ny trano fisakafoanana fiara, misotro ronono ny natory na couchette ny alina, ary mamoha ny mahazatra tontolo italiana.
Roma no mora iray ny toerana tena tanàna any Eoropa. Indrindra fa raha ianao amin'ny honeymoon. Azonao atao ny mamaky ny momba izany eto.Eto. Misy zavatra ho an'ny olona rehetra aza. Ny toerana dia feno ny safononoky ny hitan'ny olona, ​​ary efa an'arivony taona maro teo amin'ny tantara mihitsy sosona eo - ianao mahita ny zava-drehetra eto amin'ny Romanina rava ny Renaissance kanto. Tsy an-trano ihany koa ny mahafinaritra sakafo! Azo antoka 3 andro tany Roma Tsy ampy ny mahita tanteraka ny tanàna ny zava-drehetra fa tsy maintsy atolotra, fa tena ampy ny mahita ny hevitra misongadina ao raha fitantanana ny fotoananao amim-pahombiazana.
Ny Vatican City dia ny zavatra voalohany ao amin'ny lisitra noho ny fitsidihany an'i Roma. Tena firenena ny azy manokana, ao Roma, ary ny an'izao tontolo izao an-trano-toerana malaza ao anatin'izany ny Vatican Museum, ny Lasapelin'i Sixtine, sy ny St. Petera Basilica.
Fahazoan-dalana izahay no tonga teto Hianao tany am-boalohany ary mitodi-doha ho an'ny mahitsy ny Vatican Museum amin'ny dinganina ny tsipika tapakila. Manarona fomba isika tamin'ny firesahana ireo andalana tany Roma bebe kokoa ao amin 'ity lahatsoratra ity, fa raha hividianana ny Omnia Roma sy Vatican mandalo, dia hanana ny safidy mialoha timeslot boky iray ho an'ny dinganina ny tsipika teny.
Vatican City, firenena kely indrindra eto an-tany
Gateway Best Destinations any Eoropa nandeha nandritra ny faran'ny herinandro: Brussels sy Amsterdam
Noho ny vaovao-nankany haingam-pandeha Eurostar Ampiofano London ho any Amsterdam. Nandehanany teo London sy Brussels ampiasaina mba haka 5 ora, ary mandray anjara ny fiovam-fiaran-dalamby in Brussels. Ny fiaran-dalamby vaovao sitrapony fitaterana 900 mpandeha isan'andro ary haka ihany 4 ora. Lavorary ho nankany Bruxelles, na Amsterdam ho ny faran'ny herinandro!
Izay tokony hatao any Bruxelles nandritra ny faran'ny herinandro Gateway:
Misy izany zavatra be izany atao in Brussels, indrindra fa amin'ny faran'ny herinandro fohy lavitra. Izany no anankiray amin'ireo tanàna ireo ny tanteraka ho lava faran'ny herinandro, trandrahana ny manan-tantara toerana sy ny fanesoana ny waffles rehetra dia afaka mahazo ny tanana.
Tsy maninona hoe impiry izay vangianao Grand Place, izany faritra izay tsara tarehy foana hitsidika. Mampiaraka miverina efa ho 300 taona, Grand Place tsara tarehy loatra ny manina.
Tamin'ny fotoana sasany ny taona, ho hitanao vitsivitsy hetsika samihafa, tsena, sy ny zavakanto fametrahana. Aza adino ny mitsidika ny Brussels City Museum sy ny Efitrano Town izay samy mihantona ny an-kianja.
Cologne any Brussels Lamasinina
Paris Liege Fiaran-dalamby
Bruxelles ny Liege Fiaran-dalamby
Jereo ny lapan'ny
Brussels no manana ny lehibe indrindra (ary mety, ny lehibe ao) lapan'ny fitsarana tany rehetra Eoropa. ankehitriny, misy amin'izao fotoana izao famerenana ny sasany miasa foana fa tsy tokony hijanona ny fitsidihana - izany tokoa no trano tsara tarehy.
Ahoana ny hevitrao ny soso-kevitra? Isika tia Te ho fantatra! tsarovy, Save A Train dia faran'izay mora ampiasaina ary tsy manafina ny vola lany! Boky ny Weekend hiala lamasinina aminay, amin'izao fotoana izao!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/europe-travel-during-weekend/- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby -- https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, ary afaka manova ny /ru mba /ja na /tr sy ny fiteny maro.
#casabatllo #palaisdejustice #sagradafamilia #faran'ny herinandro Barcelona eurostar fialan-tsasatra travelamsterdam travelrome vaticancity
Train Tsidika, fiaran-dalamby Travel torohevitra
Train Travel Belzika, fiaran-dalamby Travel torohevitra
12345678910111213141516171819202122232425262728293031 Jan 2020Feb 2020Mar 2020Apr 2020Mey 2020Jun 2020Jul 2020Aug 2020Sept-pahatonga ny taona 2020Oct 2020Nov 2020Dec 2020
Top 5 Best Day Trips avy Brussels
10 Free Zavatra atao, Paris
The Best Places Harry Potter Fa Weekend In London